नङका लक्षणहरू जसले विभिन्न रोगहरूको जोखिमलाई संकेत गर्दछ। – Noor Health Life
नङका लक्षणहरू जसले विभिन्न रोगहरूको जोखिमलाई संकेत गर्दछ।
के तपाईलाई थाहा छ औंलाले तपाईको स्वास्थ्यको बारेमा धेरै कुरा बताउन सक्छ?
हो, यो पत्याउन गाह्रो हुन सक्छ तर डाक्टरहरूले तपाईको नङ हेरेर तपाईको स्वास्थ्यको बारेमा धेरै कुरा बताउन सक्छन्।
वैसे, नङ अक्सर उमेर संग परिवर्तन, तर यदि तिनीहरू अचानक र धेरै उल्लेखनीय छन्, यो एक डाक्टर संग परामर्श गर्न आवश्यक छ।
नङमा सेतो दाग किन देखिन्छन् ?
नङमा देखिने केही लक्षणहरू निम्न छन्, चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ।
नङ पहेंलो हुनु
महिलामा नेल पालिसको अत्याधिक प्रयोगले अक्सर नङको रङ परिवर्तन हुने गर्छ तर पुरुषहरूले यो मेकअप प्रयोग नगर्ने र नङको रङ अचानक पहेँलो वा पहेँलो भएमा यो फोक्सो वा लिम्फेटिकको लक्षण हुन सक्छ। तन्तु समस्याहरू।
यदि नङको माथिल्लो भाग सेतो भएमा यो सामान्यतया बुढ्यौलीको संकेत हो तर यदि तपाई अन्य कुनै रोग वा चिकित्सा समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ किनकी यी सेतो नङहरु मिर्गौला, कलेजो वा रोगको संकेत हुनसक्छन् । हृदय रोग हो
मानिसहरु किन नङ चपाउँछन् ?
खैरो वा कालो रेखा
नङको सतहमा गाढा खैरो वा कालो धारहरू देखा पर्नु छालाको क्यान्सर सहित विभिन्न छाला समस्याहरूको परिणाम हुन सक्छ, त्यसैले यस्तो अवस्थामा डाक्टरसँग परामर्श गर्नुहोस् ताकि उसले यस सम्बन्धमा सही निदान गर्न सकोस्।
यदि नङहरू छालाबाट बाहिर निस्कन थाले भने, यो थाई राइड रोग, ग्रन्थी रोग वा अन्य अटोइम्यून रोगहरूको कारण हो।
चम्मच आकारको नङ
यदि नङ चम्चा जस्तै माथितिर झुक्यो भने शरीरमा आइरनको कमीले पनि हुन सक्छ नङले तपाईको स्वास्थ्यको बारेमा के भन्छ ?
नङको स्वास्थ्यले मानिसको समग्र स्वास्थ्यको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ जुन जानकारीको अभावमा बेवास्ता गरिन्छ वा बेवास्ता गरिन्छ, यदि तपाइँको नङमा निम्न ५ लक्षण देखा पर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँ चिन्तित हुनु आवश्यक छ।
चिकित्सा विज्ञहरूका अनुसार नङ सजिलै भाँच्नु र पातलो हुनु असामान्य होइन, तर यो तपाईको समग्र स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण संकेत हो।
यहाँ5संकेतहरू छन् जुन तपाइँको नङले तपाइँको समग्र स्वास्थ्यको बारेमा बताउन खोजिरहेको छ।
कमजोर थाइरोइड ग्रंथि कार्य।
यदि तपाईको नङ सजिलै भाँचिएको वा पातलो छ भने, यो व्यक्तिको थाइरोइड ग्रन्थीले राम्ररी काम नगरेको र आवश्यक मात्रामा समयमै निस्कन नसकेको संकेत हो।
यदि नङ बाक्लो तर सजिलै भंगुर वा नराम्रो छ भने, यसको मतलब शरीरले आवश्यक मात्रा भन्दा बढी हर्मोन निस्किरहेको छ वा भिटामिन ए, सी र बायोटिनको कमी छ।
बिग्रिएको फोक्सो कार्य।
नङको माथितिर निस्कने र गोलाकार सतह बनाउनुलाई ‘क्लबिङ’ भनिन्छ, क्लबिङ भनेको फोक्सोको काम कमजोर भएको संकेत हो, यसको मतलब तपाईंको फोक्सोले आवश्यक मात्रामा अक्सिजन नपाएको र रगत पर्याप्त नपुगेको हो। अक्सिजन सकिएको छु।
तपाईलाई सोरायसिस हुन सक्छ।
सोरायसिस एक छालाको रोग हो जसमा मानव कोशिकाको बृद्धि १० गुणा बढ्छ।यो रोग नङमा पनि लाग्न सक्छ।यो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुनुको कारणले हुन्छ।यस्तो अवस्थामा नङ बाक्लो,खुरा र सेतो हुने गर्दछ। यस लक्षणमा पनि दुखाइ हुन्छ।
बिग्रिएको कलेजो कार्य।
मदिरा सेवन गर्नेहरूलाई कलेजोको रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ, जसमा पहिले तिनीहरूको कलेजोको आकारलाई अनुचित आकारमा बढाउनु समावेश हुन्छ।
एक स्वास्थ्य प्रतिवेदन अनुसार, विश्वमा 68% मानिसहरूलाई कलेजो रोग छ। यदि तपाईं रक्सी प्रयोग गर्नुहुन्न र अझै पनि यी लक्षणहरू छन् भने, तुरुन्तै आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श गर्नुहोस्।
मधुमेह भएको ।
नङमा मधुमेहका लक्षण देख्न सकिन्छ, चिकित्सकीय परीक्षण गर्नुअघि नै नङबाट यसको निदान गर्न सकिन्छ, यदि नङ पहेँलो भएको छ भने यो ब्लड सुगरको संकेत हो भने नङको छालाको छाला रातो भएमा यस्तो हुन्छ । मधुमेह सुरु भएको संकेत। नङमा फङ्गल संक्रमणको लक्षण उपचार र सावधानीहरू।
Onchocerciasis पनि भनिन्छ, यो रोगले मुख्यतया वृद्धहरूलाई असर गर्छ। त्यहाँ धेरै प्रकारका फफूंदीहरू छन् जसले नङलाई असर गर्न सक्छ, जस्तै खमीर, मोल्ड, आदि, तर सबैभन्दा सामान्य फफूंदी डर्माटोफाइट हो, जुन संक्रमणको सबैभन्दा सामान्य कारण हो। यी नङ संक्रमणहरू नङ मुनि सेतो र पहेंलो दागको रूपमा देखा पर्दछ र यदि उपचार नगरी छोडियो भने, तिनीहरूले सम्पूर्ण नङलाई समात्न सक्छ र नङहरू कडा र बाहिर निस्कन सक्छ।
लक्षणहरूमा सास गन्हाउनु, कडा र भंगुर नङहरू, र नङहरू पहेँलो वा खैरो हुनु समावेश छ। चिन्ताका कारणहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कमी, बढ्दो उमेर, अत्याधिक पसिना आउनु, नङमा संक्रमण हुनु र फोहोर ठाउँमा खाली खुट्टा हिड्नु पर्दछ। थप रूपमा, मधुमेहका बिरामीहरूमा खुट्टामा कम रक्त प्रवाह यी व्यक्तिहरूमा रोगको प्रमुख कारण हो। उपचारमा सजिलै उपलब्ध औषधिदेखि लिएर प्रिस्क्रिप्शन औषधिसम्म सबै विकल्पहरू छन्।
। आफ्नो हात र खुट्टा को नियमित सफाई
। नङहरू राम्ररी काट्नु पर्छ र बाङ्गो कुनाहरू बेवास्ता गर्नुपर्छ
। नेल पॉलिश राम्ररी सफा गर्नुपर्छ
। बन्द जुत्ता लगाउँदा मोजा लगाउनुपर्छ
। यदि नङहरू सैलुन वा पार्लरमा उपचार गरिन्छ भने, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सबै उपकरणहरू सफा छन्। थप प्रश्न र उत्तरहरू प्राप्त गर्न नूर हेल्थ लाइफ इमेल गर्नुहोस्। noormedlife@gmail.com